Bursa မြို့ပြမြူနီစီပယ် | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Bursa အသွားအလာအတွက် node ကိုဖွင့်လှစ်
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်, နေ့စဉ်ယာဉ်အသွားအလာ Istanbul Acemler လမ်းဆုံရှိ 15 ဇူလိုင်လအာဇာနည်တံတားထက်ပို။ ပင်ဖြစ်ပါသည်, ဆက်သွယ်မှုလမ်းလေ့လာမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏မြို့တော်ဝန် Alinur [ပို ... ]
Bursa ၏ရထားလမ်းများပေါ်တွင် T2 terminal tram line တည်ဆောက်ခြင်းကိုဖျက်စီးခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်ကဖော်ပြသောပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ် 2019 ဆောင်းရာသီအားကစားကျောင်းများလူငယ်နှင့်အားကစား ၀ န်ဆောင်မှုဌာနနှင့်“ အားကစားကိုသွားကြစို့ X 19 အောက်တိုဘာ 2019 - 17 မေ 2020 [ပို ... ]
သိပ္ပံကိုစိတ်ဝင်စားသော 15-24 လူငယ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား ၀ န်ဆောင်မှုဌာနခွဲ၊ Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်၊ 132 young သည် TEKNOFEST'le ကိုအတူတကွစုရုံးခဲ့သည်။ Bursa သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစင်တာ၊7သည်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် [ပို ... ]
Bursa, 2020-2024 မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေသများ
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် '' တညီတညွတ်တည်း '' မဲပေးမွေးစားခဲ့ပါတယ်,52020-2024 မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ၏ဖယ်ရှားရေး, အ Metropolitan ခရိုင်ကောင်စီအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်လာမည့်နှစ်တွင်မြို့တော်ရဲ့ပြဿနာများကို '' အထူးသသယ်ယူပို့ဆောင် '' ။ ခါတိုင်းလိုစက်တင်ဘာလအတွက်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးညီလာခံ [ပို ... ]
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor Kulübü arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan tarafından imzalandı. Başkan Aktaş, Bursaspor’a sahip çıkılması gerektiğini [ပို ... ]
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်၊ မြို့တော်၏ခရိုင်အားလုံးတွင်လမ်းခင်းခြင်း၊ ကတ္တရာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Bursa ၏လက်ရှိလမ်းကွန်ယက်ကိုပိုမိုကျန်းမာစေရန်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း [ပို ... ]
အငယ်နှင့်အတူအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်! .. Burulaş 12 25 မီတာနယူးဘတ်စ်ကားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti. Bursa’nın en temel [ပို ... ]
အချက်တွေကို Izzet Bursa Bursa စီးတီးပြတိုက်တွင်၏ဗိုလ်ကြီးများ၏ဒဏ္ဍာရီ
Bursa ၏အရေးပါသောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးİzzet Kaptan ဟုလူသိများသောİzzet Bayrak ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Bursa City Museum တွင်ပြသထားသည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များဖြင့်ဖန်တီးထားသော Bursa City Museum သို့ Izzet Kaptan မှလှူဒါန်းမှုများ [ပို ... ]
Yenişehir ilçesi Söylemiş Mahallesi’nden geçen, Yolören, Çeltikçi Karasıl ve Çardakköy mahalleleriyle bağlantıyı sağlayan ancak ortasında meydana gelen çökme yüzünden yıkılan köprü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Bursa’nın en temel sorunu [ပို ... ]
signal လေ့လာမှုလုပ်ဖို့ Bursaray ခုနှစ်တွင်: 23.10 လေ့လာရေးခရီးအကြား Acemler Şehreküstü Bitte မည်!
Bursaray’da kapasiteyi yüzde 60 artıracak çalışmalar kapsamında 26-26-28-30 Ağustos tarihlerinde Acemler-Şehreküstü istasyonları arasında metro seferleri saat 23.10’da son bulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlatılan [ပို ... ]